Nagu saabsan – Red Sea Energy
Tamarta ayaa la fududeeyay
Hadafka ugu weyn ee RED SEA ENERGY waa in la helo koronto jaban oo qof walba heli karo. Macaamiishayadu waa kuwo gaar loo leeyahay oo shirkado leh. Hal shay oo ay Red Sea Energy rabto inay cadeyso ayaa ah; Waxaan daacad ka nahay sida aan ula dhaqanno macaamiisheenna.
Waa kuma guuleyste? Heshiiska koronto ee ugu soo jiidashada badan ee lala galo Tamarta Badda Cas waa SPOT. Qiimaha suuqa ayaa la raacayaa halkan, macaamiisheenuna waxay helayaan qiimaha wax iibsiga. Waxa kaliya ee aan ku darno qiimaha wax iibsiga waa qadar go’an, ama lacag yar oo dheeri ah. Macaamiisheenu waa inay sidaa darteed haystaan fikrad ah waxa ugu yar ee dheeriga ah ee la kordhin doono.
Red Sea Energy is sustainable
RED SEA ENERGY waxay ka qayb qaadataa ka dhigida bulshada mid sii waarta dhinac walba. Waxaan bixinnaa 100% dammaanad qaadka qanacsanaanta macaamiisha, iyo 100% tamar la cusboonaysiin karo.
“Tamar jaban oo cagaar ah qof walba”